शास्त्रअनुसार महिलाले यसरी लगाउनुहोस् सिउँदोमा सिन्दुर, बढ्नेछ पतिको उमेर ! – Sandesh Press
August 8, 2021 651
काठमाडौँ । तपाईले कयौँ व्यक्तिलाई देख्नुभएकै होला कि महिलाहरुले पाउमा बिछिया लगाउने गर्दछन् । तर किन लगाउने गर्दछन् भन्ने बारेमा सायद कमै व्यक्तिहरुलाई थाहा होला ।
Prevमेसीले भावुक हुँदै भने– ‘म एकदिन यहीँ फर्किनेछु, मेरो बच्चाहरुसँग कसम खाएको छु’
Nextसाम्राज्ञीको प्रेमी बन्दै जितु
डाक्टरले नै अब धेरै बा’च्दैनन् भनेपछि बि’रामीले ‘अब म बाँचेर काम छैन घा’ट लैजान’ भन्न थालेपछी…(हेर्नुस् भिडियो )
पुजा शर्मालाई झड्का ! युटुबे नायिकाको कुरामा आँचलले लिईन् प्रकाश सुबेदीको पक्ष ! म पनि युटुबे नायिका
एमाले कार्यकर्ताको अ प ह र णपछि ह त्या , करिब ३ किलोमिटरमाथि श व भेटियो